ओ-मिक्रोन पछि भारतमा फेरी भेटियाे को-राेनाको अर्को नयाँ भेरियन्टका संक्रमित, यस्ता छन् लक्षण ! - Info Nepal
INFONPLसमाचारओ-मिक्रोन पछि भारतमा फेरी भेटियाे को-राेनाको अर्को नयाँ भेरियन्टका संक्रमित, यस्ता छन् लक्षण !
ओ-मिक्रोन पछि भारतमा फेरी भेटियाे को-राेनाको अर्को नयाँ भेरियन्टका संक्रमित, यस्ता छन् लक्षण !
को-भिडको नयाँ भेरिएन्ट ओ-मिक्रोनको संक्रमण नसकिदै भारतमा फेरी अर्को नयाँ भेरियन्टका संक्रमित फेला परेका छन् । ओ-मिक्रोन पछि पुष्टि भएको नयाँ भेरियन्टलाई बिए टु भनिएको छ । भारतमा अहिले सम्म १६ जनामो बिए टु पुष्टि भएको छ । जसमा बालबालिका पनि छन् । विश्वभरमा हाल ओ-मिक्रोन भेरियन्टको संक्रमण दर बढ्दो रहेको छ ।
यसैबीच फेरि को-रोनाको अर्को भेरियन्टको ख-तरा देखिएको छ । यस भेरियन्टलाई बिए टुको नाम दिइएको छ । भारतको मध्य प्रदेशस्थित इंदौरमा ओमिक्रोनको नयाँ भेरियन्ट बिए टु पुष्टि भएको हो । सो शहरमा १६ जनामा उक्त भेरियनट पुष्टि भएको हो । जसमध्ये ६ जना बालबालिका रहेका छन् ।
भारतबाट ५३० नमुना परीक्षणका लागि पठाइएको भातीय संचारमाध्यमले जनाएका छन् । बेलायत, अष्ट्रेलिया र डेनमार्कमा पनि यस्तो संक्रमण पाइएको छ । यो भेरियन्ट ओ-मिक्रोन जस्तै छिट्टै फैलिन्छ । को-रोनाको यो नयाँ भेरियन्टको पहिचान हुन नसकेमा यसलाई नियन्त्रण गर्न अर्को ठूलो चुनौती रहेको छ ।जसकारण बिए टुलाई स्टिल्थ अर्थात् लुकेको भर्जन भनिएको छ ।
बिए टु कहाँ र कहिले भेटियो:- हालसम्म यो भेरियन्टको पहिलो संक्रमण कहाँ पाइयो भन्ने स्पष्ट छैन । बेलायतको स्वास्थ्य सुरक्षा एजेन्सीका अनुसार बेलायतमा पहिलो पटक २०२१ को डिसेम्बर ६ मा पत्ता लगाइएको थियो । सो देशमा यो भेरियन्टको ४२६ केस पुष्टि भइसकेको छ ।
कतिको भयानक छ यो भेरियन्ट:- को-रोनाका सबै भेरियन्टहरुमा अनुसन्धान गरिरहेका युनिभर्सिटी अफ जेनेभाका निर्देशक फ्लाहल्टका अनुसार बिए टुसँग ड-राउने भन्दा पनि सर्तक हुन आवश्यक छ । यस नयाँ भेरियन्ट ओ-मिक्रोन जस्तै संक्रामक रहेको छ । यदपी अहिलेसम्म यो कतिको भयानक छ भन्ने पत्ता लागिसकेको छैन ।
बिए टु भेरियनटको लक्षणहरु:- को-रोनाको नयाँ भेरियन्ट बिए टुको लक्षण ओ-मिक्रोनको जस्तै छ । ओ-मिक्रोन पुष्टि गर्नका लागि जुन जेनेटिक स्रोत खोजिन्छ, त्यो बिए टु मा हराइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा जेनेटिक सिक्वेन्सिंगका माध्यमबाट यो भेरियन्टको पहिचान गर्न सकिन्छ ।